Ny lahatsoratr'i John Theis momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i John Theis
John Thies no CEO sy mpiara-manorina an'i Email amin'ny Acid, serivisy manome topy maso ireo mpivarotra mailaka momba ny fomba aseho ny mailak'izy ireo amin'ireo mpanjifa mailaka malaza indrindra sy fitaovana finday. Mipetraka any Denver, Colorado izy mivady sy ny zanany lahy. Rehefa tsy miasa izy dia na eo amin'ny kianja filalaovana na mitaingina ranomandry ao anaty vovo-tsiranoka vaovao.
Alatsinainy Oktobra 3, 2016 John Theis
Ny vanim-potoana fiantsenana Krismasy dia iray amin'ireo fotoana manandanja indrindra amin'ny taona ho an'ny mpivarotra sy mpivarotra, ary ny fampielezan-kevitry ny varotrao dia mila maneho an'izany. Ny fananana fampielezan-kevitra mahomby dia hiantoka ny fisarihana mendrika anao mandritra ny fotoana mahasoa indrindra amin'ny taona. Amin'izao tontolo izao ankehitriny, ny fomba fitifirana basy dia tsy hanapaka azy intsony rehefa manatratra ny mpanjifanao. Ny marika dia tsy maintsy manamboatra ny ezak'izy ireo amin'ny varotra hihaona amin'ilay olona